वीरगञ्जमा नक्कली लाईसेन्सः ‘विचौलियाहरु भन्छन्. घुसको रकम एक मुस्ट बुझाएर जति लाईसेन्स लगेपनि हुन्छ’ (भिडियो) – पुरा पढ्नुहोस्……
वीरगञ्जमा नक्कली लाईसेन्सः ‘विचौलियाहरु भन्छन्. घुसको रकम एक मुस्ट बुझाएर जति लाईसेन्स लगेपनि हुन्छ’ (भिडियो)
काठमाडौं । नारायणी यातायात व्यवस्था र्कायलय वीरगंजको लाईसेन्स फाँटमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
कार्यलयका र्कमचारीहरुले विचौलिया र्माफत रकम असुल गरी जो कोहीलाई सवारीका साधन चालक अनुमति पत्र दिने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था र्कायलयका कर्मचारीहरुले दुई पांग्रेको लाईसेन्स दिँदा आन्तरिक १० हजार लिने र विचौलियाले सेवाग्राही संग १५ हजार असुल गर्ने गरेको पाईएको छ ।
त्यसरी असुल गरिएको रकम मध्ये २० प्रतिशत जिल्ला ट्राफिक कार्यलयको भागमा छुट्याईएको गरेको समेत पाईएको छ । हाम्रो विरगञ्ज व्युरोको टिमले गरेको स्टिङ अपरेशनमा लेखापढीका नाममा विचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिहरुले सवै खुलाएका छन् । विचौलियाहरु भन्छन्. घुसको रकम एक मुस्ट बुझाएर जति लाईसेन्स लगेपनि हुन्छ ।
नारायणी यातायात व्यवस्ता र्कायलय वीरगंजले स्थानिय राजनैतिक दलका नेताहरु कही सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत मिलाएर अनियमिता गर्दै आएको छ । विचौलिहरुको माध्यमबाट परीक्षण फेल भएको सेवाग्राहीहरुलाई समेत रकम असुल गरेर पास गराईदिने गरेको पाईएको छ ।
नारायणी यातायात व्यवस्ता कार्यलय वीरगंजमा अख्तियार दुरुप्योग अनुशन्धान आयोगले पटक पटक छापा मारी कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरेपनि हालसम्म कोहीपनि कर्मचारी माथि र्कायवाही नहुदा कर्मचारीहरु हौसिएर भ्रष्टाचार गरी नै रहेका छन् ।
सवारीका साधन अनुमती पत्रका लागि विचौलियाहरु वीरगंजका साथै हेटौडा, नारायणगढ, पोखरा, कलैया, निजगड, गौर लगायतका स्थानमा परिचालित छन् । यस्तै वीरगंजमा संचालनमा रहेका ड्राईभिग ट्रेनिङ सेन्टरहरुले समेत ट्रेनिङ विना प्रति व्यतिm एक हजार देखि लिएर १५०० सम्म रकम लिएर र्सटिफिकेट दिने गरेका छन् भने सम्र्पुण अनियमितता गराउने यातायात र्कायलयका सहयोगी शम्भु गुरुङ नै भएको र जुन सुकै प्रमुख र र्कमचारी आएपनि रकम लिने गरेको पनि अर्काे तथ्य फेला परेको छ ।
यसरी पैसाका भरमा किनिएका लाईसेन्स वाहकले गराउने दुर्घटनाका कारण बर्षेनी हजारौकले ज्यान गुमाउछन् ।
भिडि यो हेर्नुहोस्
Prevकाठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटोहरुमा
Nextसबैको ढुकढुकी रबिले दिए धुर्मुस-सुन्तलीलाई यति ठूलो साथ..
चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले सबै पत्रकार समक्ष गरे यस्तो घोषणा…. पुरा हेरि सक्दो सेयर गरौ।